Maraykanka oo u yeeray horjooge Muuse Biixi waa maxay danta uu wataa? - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maraykanka oo u yeeray horjooge Muuse Biixi waa maxay danta uu wataa?
Horjooge Muuse Biixi oo la filaayo in si xun loogu garaaco doorashada aakhirka sanadkan ayaa isku dayaaya sidii uu maamulka ku sii dheeraysan lahaa, waxase xisbiga Wadani iyo kan Faysal Waraabe oo intuba isku hal jufo ah qabaan inay dagaal ka xigaan.
Haddaba waxaad is weydiin kartaa waxa hadda keenay in Maraykanku u yeedho horjooge Muuse Biixi oo haba yaraatee aan wax taageere ka haysan qabiilka ISAAQA ee uu ku abtirsado ayadoo ay burburtey sheekadii goosadka.
”ISAAQA badankiisa hadda ma danaynayaan sheekada goosadka waxayna burburtey markii horjoogahan maamulka loo dhiibay, waxa inta badan ISAAQU hadda u ololeeyaa bal in XAMAR laga dhiso hanaan dawladnimo oo dadka wada deeqa ayuu yidhi Xuseen Warsame.
Waxase booskaa banaan ee loogu magacdari jirey aqoonsi raadsiga hadda buuxinaya Maraykanka oo baryihii dambe iyo dhawaanba koox xildhibaano ah u soo direy Hargeysa, ayadoo ujeedada ay ka leeyihiin ay tahay inaan qas ka dhicin Hargeysa iyo Burco.
”Danta hadda ay leeyihiin Maraykanku ayaa ah inay ka baqayaan in madaxweyne Farmaajo soo noqdo tana waxay wax weyn u dhimaysaa danahooda weyn ee geeska Afrika ayuu raaciyay Xuseen Warsame. Waxa ugu weyn waa in Shiinaha laga celiyo Somaliya guud ahaan iyo in Somaliya xiriir la yeelato Ruushka ayna yarayso xiriirka ay la leedahay Turkiga.
Mar haddii labadaa suurogal ahayn waxay xoojiyeen inay boodhka ka jaftaan maamulka Hargeysa oo ay gelinayaan dhaqaale xoogan oo deegaanada magaca wada wata ayna helin.
Tani ictiraaf ma siinaysaa marhore laga niyad jabay Hargeysa iyo Burco jawaabtu waa maya laakiin waa i arka halkan anaa ka taliya, waana waxa uu Taywaan inoogu keenay ayuu yidhi Xirsi Warfa.